မြန်မာပြည်သို့ အလည်တခေါက် ~ White Angel
8:13 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 26 comments
ကျမသိပ်ပြီး လွမ်းဆွတ်ခဲ့ရတဲ့ “အမိမြန်မာပြည်”....
တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျမရဲ့ရင်ခုန်နှုန်းတွေမသိမသာ မြန်ဆန်လာခဲ့ရတယ်..။
" ဘာအတွက်ရင်ခုန်တာလဲ?? " . . . . .
ချစ်သူနဲ့တွေ့ရမှာမို့လား?? ... ချစ်သူက မြန်မာပြည်တွင်းမှာမှမဟုတ်တာပဲ...မိဘတွေနဲ့ တွေ့ရမှာမို့
လား?? ... ကျမရဲ့မိဘတွေ ဆုံးပါးသွားခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီပဲ....
" အဲဒါဆိုရင်...ကျမဘာကြောင့် ရင်ခုန်ခဲ့ရတာလဲ??? " . . . . .
ကျမဖွားမြင်ရာ “မြေ”... ကျမကြီးပြင်းရာ “မြေ”...ဒီ “မြေ”ပေါ်မှာနေ...၊ ဒီ“ရေ” ကို သောက်....ပြီးကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ “အမိမြန်မာပြည်” ကို ခြေချရတော့မှာမို့ ကျမရင်ခုန်ခဲ့သည်ပဲ..။
လေယာဉ်ပေါ်က အဆင်းမှာ မိုးရွာပြီးကာစမြေသင်းနံ့သင်းသင်းလေး တခုကိုအားပါးတရ ရှူရှိုက်မိလိုက်
တယ်ဆိုရင်ပဲ လွမ်းလိုက်တာ အမိမြန်မာပြည်ရယ်....။လေယာဉ်လှေခါးပေါ်မှ တထစ်ချင်း လျှောက်လှမ်းရင်း အဆောက်အဦးကြီးထဲကို ကျမရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျမရဲ့မျက်လုံးတွေကို မယုံနိုင်လောက်အောင် ကပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၆)နှစ်တာ ကာလက အဆောက်အဦးနဲ့ များစွာကွဲပြားခြားနားတဲ့ ခမ်းနားလှတဲ့ လေယာဉ်အဆောက်အဦးကြီးက ကျမကို ဆီးကြိုလို့ပေါ့...။
ပြည်ပဧည့်သည်များဆိုက်ရောက်ရာ နေရာမှာ စောင့်ကြိုနေကြတဲ့ လူတွေကြားထဲက ကျမရဲ့တဦးတည်း
သောအန်တီကို လက်ပြရင်း အန်တီရဲ့ကြိုတင်စီစဉ်ထားမှုနဲ့ အစစ်ဆေး၊ အမေးအမြန်းမရှိပဲလေယာဉ်အ
နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ကြီးလည်း မှောင်နေပြီပေါ့ ။
လေဆိပ်ကနေ အိမ်ရောက်တဲ့အထိ မီးပွိုင့်တွေကို တခုချင်းဖြတ်ကျော်ရင်း အိမ်အရောက်မှာတော့ အသင့်စောင့်နေတဲ့ မြန်မာထမင်းဟင်းဝိုင်းက ကျမကို ခရီးဦးကြိုနေလေရဲ့။
ခနနားပြီး ရေချိုးပြီးချိန်မှာတော့ အဆင်သင့် စောင့်နေတဲ့ ထမင်းပွဲရှေ့အရောက်မှာ “ဗြုန်း” ဆို မီးက ပျက်သွားပါလေရေ. ဟီး....အဲဒါလဲ မဆိုးပါဘူး...၊ ဘိုတိုင်းပြည်ကလို စားပွဲအလည်မှာ ဖုယောင်းတိုင်လေးနဲ့ ညစာ စားလိုက်ရတာလည်း အရသာတမျိုးပါပဲ..။(နောက်ပိုင်းသိလိုက်ရတာက ရပ်ကွက်တွေကို အလှည့်ကျ မီးပေးစနစ်နဲ့ မီးပေးတာတဲ့လေ)။
ထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ အန်တီနဲ့ စကားတွေအကြာကြီးပြောဖြစ်ခဲ့တယ်...။ အိပ်တော့မယ်ဆိုပြန်တော့ အဲယားကွန်းရှိ ပေမယ့်လည်း မီးမလာတဲ့အတွက် လေရနိုင်တဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာပဲ ယပ်တောင်လေးတဖြတ်
ဖြတ်နဲ့ ပထမဦးဆုံးည ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ် နောက်နေ့မနက်စောစောမှာတော့ နားထဲကို တိုးဝင်လာတဲ့ “ပဲပြုတ်..ပဲပြုတ်” “ဝါးလုံး...ဝါးလုံး”“ရွှေတွေ...ငွေတွေ..စံပ္ပါယ်တွေ”....“ကောက်ညှင်းပေါင်း...ကောက်ညှင်းငချိတ်”....
စတဲ့ မကြားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အသံလေးတွေဟာ ကျမကိုနိုးထစေခဲ့ပါတယ်..။
ကျမမျက်နှာသစ်ပြီးချိန်မှာတော့ စားပွဲပေါ်က မြောင်းမြဒေါ်ချို မုန့်ဟင်းခါးကို အဝစားပြစ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ဆိုက်ပရပ်စ်က ပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လူကြုံပစ္စည်းတွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်ပို့ဖို့ အိမ်ကနေ “စ”ထွက်ရင်းရန်ကုန်မြို့ တခွင်လှည့်လည်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့သမျှတွေကိုတင်ပြရင်း....သူငယ်ချင်းတို့ကြည့်ဖို့
(ထုံးစံအတိုင်း ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပို့ပေးလိုက်တယ်နော်)။
" ရာသီဥတု အခြေအနေ " ။ ။ နေသားမကျသေးတဲ့ ကျမအတွက်တော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရာသီဥတုဟာ သိပ်ပူပါတယ်...။လူတကိုယ်လုံး ပူစပ်ပူလောင်ခံစားချက်တွေနဲ့ အချိန်ပြည့်ချွေးစည်းတွေထွက်နေ
တတ်ပါတယ်။ ဆိုက်ပရပ်စ်က ပါလာသမျှ ကျမရဲ့အဝတ်အစားတွေဟာလည်း ပူပြင်းလွန်းတဲ့ရာသီကြောင့် အသုံးမဝင်တာကြောင့် သင့်တော်မယ့် ချည်သားအဝတ်အထည် ၃/၄ စုံကိုအရင်ပြေးဝယ်ရပါတယ်..။
ဆံပင်ကို ဖားလျှားချပြီး ပဲများမယ့်အစီအစဉ်ကို ဖျက်ပြီး ဆံပင်ကို ကျောလယ်လောက်ညှပ်လိုက်ပြီး အချိန်
ပြည့် ကလစ်တခုနဲ့ ဂုတ်ပေါ်အောင် ပင့်တင်ထားရပါတယ်..။
" ကုန်ဈေးနှုန်း " ။ ။ ကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်ထွက်တာဆိုလို့ အဝတ်အစားပဲရှိတာမို့ အပေါ်အင်္ကျီတထည်ကို ၁သောင်းခွဲနဲ့ ၂သောင်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုက်ပရပ်စ်က ဈေးနှုန်းထက် အများကြီးသက်သာတဲ့အပြင် ကျမအကြိုက်ဒီဇိုင်းလေးတွေမို့ ကျမကျေနပ်ပါတယ်။
"လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး " ။ ။ ဘယ်ပဲ သွား သွား..Taxi နဲ့သွားရတာမို့ အဆင်ပြေပါတယ်၊ ကားခကတော့ အနည်းဆုံး ၂၀၀၀ ကျပ်ကပုံမှန် လိုဖြစ်နေပါပြီ။ ကျမက လူကြုံပစ္စည်းတွေ လိုက်ပို့ရတာမို့ တရက်ထဲနဲ့ ၃နေရာလောက်သွားနေရပါတယ်။
" အင်တာနက် " ။ ။ တနာရီကို ၅၀၀ကျပ်ပါ၊ မီးမလာတဲ့အချိန်တွေမှာ လူတွေဟာ မီးစက်နဲ့ဖွင့်တဲ့ အဲယားကွန်းရှိတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ အချိန်ဖြုန်းရင်း ပြည့်လျှံလို့နေပါတယ်..၊ အင်တာနက်ဆိုင်တွေအတွက် အတော်ကို အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
" မြို့သန့်ရှင်းမှု " ။ ။ ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့် ကုက္ကိုလ်ပင်၊ ဘန်ဒါပင်၊ ညောင်ပင်တွေနဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေလှတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ အမှိုက်သရိုက်များ ကင်းရှင်းနီုင်လျှင်တော့ အလွန်ကျက်သရေရှိသော မြို့ကြီးဖြစ်မှာ သေခြာပါတယ်။ တချို့နေရာလေးတွေကတော့ တော်တော်လေးကို သန့်ရှင်းလှပါတယ်..။
" ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး " ။ ။ ကျမရဲ့ဖုန်းထဲကို FEC ၂၀ တန် ဖုန်းကဒ် လေးတကဒ်ဝယ်ထည့်ထားပါတယ်..။ရန်ကုန်မြို့တွင်းအတွက် အဆင်ပြေပြီး နိုင်ငံခြားမှသူငယ်ချင်းတချို့က ခေါ်လို့ရပြီး အများစုက ကျမကို ဆက်သွယ်လို့မရဘူးလို့သိရပါတယ်။
" ဆွေမျိုး " ။ ။ ကျမမြန်မာပြည်ကို မရောက်ခင်ကာလက (၂၇.၀၃.၂၀၁၀)နေ့က ဆွေမျိုးတော်ဆပ်သူ ယောင်းမတယောက် ကားအက်ဆီးဒန့်ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက်ဆုံးသွားပါတယ်။
" မိုး " ။ ။ မရွာလျှင်လည်း ပူပါတယ်၊ ရွာပြန်တော့လည်း ကားလမ်းမတွေ ရေမြုတ်တဲ့အထိ ရေများတာကြောင့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးတွေ ပြတ်တောက်တဲ့အထိပါပဲ။
" ရေ " ။ ။ သူများတွေရဲ့အိမ်တွေမှာ ရေအခက်အခဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်..၊ ကျမနေတဲ့အိမ်မှာတော့ ရေပေါပါတယ်..။" သူငယ်ချင်း " ။ ။ ဘလော့ကာ သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြတဲ့ ရန်ကုန်က မမိုးငွေ့၊ ကိုတူး(ညလင်းအိမ်)၊ ဒေါင်းဒေါင်(အနှိုင်းမဲ့)၊ ကိုသက်တန့်ချို၊ ကိုနေညိုရင့်၊ တို့နဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရပါတယ်။ ကိုလင်းဦး(စိတ်ပညာ) ကို ဖုန်းခေါ်ပေမယ့် ဖုန်းမကိုင်ပါ၊ မမိုးငွေ့၊ ကိုတူး၊ ကိုနေညိုရင့် တို့နဲ့တော့အပြင်မှာတွေ့ပြီးပါပြီ၊ ကိုသက်တန့်ချို၊ ဒေါင်းဒေါင် နဲ့ ကိုလင်းဦးတို့နဲ့တွေ့ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါ။
" စားခဲ့ပြီးသော အစားအစာများ " ။ ။ ငပိရည်တို့စရာ၊ ပုဇွန်ဆီပြန်၊ ချဉ်ပေါင်နဲ့မြှစ် ချဉ်ရည်ဟင်း၊ငါးဖယ်ဆီပြန်၊ ငါးဖယ်သုပ်၊ ဘဲဥဆီပြန်၊ ချစ်တီးထမင်း၊ ဒူးရင်းသီး၊ သရက်သီး၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ ကြေးအိုး၊ တုန်ယမ်ချဉ်စပ်၊ ....တွေကို စားပြီးပါပြီ။
" အနုပညာလှုပ်ရှားမှု " ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ချယ်ရီ FM က အယ်ဒီတာ မခင်လိမ္မာနဲ့ ကရဝိတ်ခမ်းမဆောင်မှာ (ရေဒီယိုမှာ ၁၀မိနစ်စာ ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အတွက်) အင်တာဗျူးရှိပါတယ်။
၂၀ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာသီချင်းအတွက် VDC ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုက်ပရပ်စ်မပြန်ခင်မှာ ကိုယ်တိုင်ဆို သီချင်းတပုဒ်အတွက် မီးမှောင်မှောင်ထဲမှာ သီချင်းကျက်နေရပါတယ်..။
" ရင်ထဲက ဆန္ဒ " ။ ။ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းလို့အလည်ပြန်လာတဲ့ ကျမအတွက် မြန်မာပြည်က တိုးတက်မှုတွေ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေ၊ ဒုက္ခ၊ သုခ၊အားလုံး...အားလုံးကို မြန်မာပြည်ထဲက မြန်မာပြည်သူများနဲ့ထပ်တူ ကျေနပ်စွာ မျှဝေခံစားရင်း ဘလော့ကာ သူငယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အရမ်းသတိရနေပါကြောင်း အသိပေးရင်း “မြန်မာပြည်သို့ အလည်တခေါက် အပိုင်း(၁) အစီအစဉ်ကို သူငယ်ချင်းတို့နဲ့မျှဝေခံစားရင်း ......
ဖတ်သွားတယ်.. ခံစားသွားတယ်.. မမြင်ရပေမဲ့လည်း ခံစားပေးလို့ ရပါတယ်.. ကိုယ်ကြီးပျင်းလာရတဲ့ ရေမြေဆိုတော့ အလိုလို စိတ်က ခံစားပေးလို့ ရနေတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..။
ညီမ အလုပ်တွေလည်း အဆင်ပြေပါစေလို့..။
တခါ မကဘူးလွမ်းလို့ တခါ မက အားဘွားးးးးးးးးးး
ဓါတ်ပုံတွေလှချက်တော့ဗျာ....ဗမာပြည်မှာ ပျော်နေပြီပေါ့လေ..ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်ခဲ့ပါ...
" စားခဲ့ပြီးသော အစားအစာများ " ။ ။ ငပိရည်တို့စရာ၊ ပုဇွန်ဆီပြန်၊ ချဉ်ပေါင်နဲ့မြှစ် ချဉ်ရည်ဟင်း၊ငါးဖယ်ဆီပြန်၊ ငါးဖယ်သုပ်၊ ဘဲဥဆီပြန်၊ ချစ်တီးထမင်း၊ ဒူးရင်းသီး၊ သရက်သီး၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ ကြေးအိုး၊ တုန်ယမ်ချဉ်စပ်၊ ....တွေကို စားပြီးပါပြီ.
အဟား သွားရေကျအောင် လုပ်နေတာလား
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နတ်သမီး စားရတယ်ဆို ကျေနပ်ပါတယ်ကွယ်..
ပြန်ခွင့်ရချိန်လေးမှာ ၀အောင် ပျော်ခဲ့ပါ..
ဗဟုသုတ မြန်မာနိုင်ငံ အလွမ်းအတွက် . .
ကျေးဇူးပါ နတ်သမီးရေ. .
စားစရာတွေနေရာမှာ တံတွေးပဲ မြိုချသွားတယ် .. :D
Nann Laypyaenu said...
အဆင်မပြေတာတွေ ဒီနိုင်ငံမှာ များတယ်ဆိုပေမယ့် နွေးထွေးမှုတော့ နတ်သမီးလေး ရမှာပါ..
( နန်း နေရာမှာ လင့်လေး ချိတ်ထားပါတယ် ကြိုခွင့်မတောင်းတဲ့အတွက် တောင်းပန်သွားပါတယ်) :P
အစားအသောက်တွေ ဂရုစိုက်ပါ နတ်သမီးလေးရေ... ရာသီဥတု နဲ့ အစားအသောက် အပြောင်းအလဲ ကို သေချာ ဂရုစိုက်ပါ...
မုန့်ဝယ်ခဲ့... :) :)
ရောက်တုန်း လုပ်ချင်တာလေးတွေ ဝအောင် လုပ်သွားနော်..
နတ်သမီးနဲ့ အလှချင်းပြိုင်တော့ မိုးငွေ့ရှုံးသွားတယ်..။
း) ခဏကြာမှ ညစ်မှာ ဟိဟိ
မီးစက်သံတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြိှု့ကြီး ဆူညံလို့း)
နှပ်သမီးလေးရေ... အမိမြေမှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေ ကြုံခဲ့ရပါစေ...
အရုပ်ကလေး၊ကိုမင်းသုခ၊အနှိုင်းမဲ့၊ တာတာ၊လဲ့ရည်၊ ရင်ခတ်နွယ်(ကိုမင်း)၊ ကိုဖြိုး(ရင်နင့်သူ)၊အချစ်မဲ့ဂီတာ...စတဲ့ ဘလော့ကာသူငယ်ချင်း များနဲ့ ထပ်တွေ့ပြီးပြီ....
(၁၂)ရက်နေ့က မမိုးရဲ့အိမ်မှာ မမိုးချက်တဲ့ မမိုးရဲ့လက်ရာ...ကောင်းမှကောင်းပဲဗျို့....
နတ်သမီးကတော့ ကြက်သားဟင်းစားတယ်၊ ကိုတူးကတော့ ဝက်သားဟင်းစားတယ်...
(၁၃)ရက်နေ့က BAK Shopping center မှာ အများရဲ့မျက်စောင်းထိုးခြင်းကိုခံနေရတဲ့ ကိုတူး(ညလင်းအိမ်)ပွဲတိုင်းကျော်အပါအဝင်....
နာမည်ပေး ကင်ပွန်း မတပ်သေးလို့ တော်သေးတးယ် ..
မပြောရဘူးနော် .. :P
အသစ်လည်းတင်ဘူး။ မမနတ်သမီးနေကောင်းရဲ့လား။ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေလည်ပတ်တွေ့ရတာနဲက မောနေရော့ပေါ့။ အွန်စောဆီလည်း အရောက်လာခဲ့နော်။
ဂျီးတော် ကျုပ်ကိုကျ ဓါတ်ပုံလဲ မပို့ဘူး။ ဒါပဲ။